Fiaramanidina kely no nianjera tany amin'ireo tokantranon'ny manodidina: 2 maty
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Fiaramanidina kely no nianjera tany amin'ireo tokantranon'ny manodidina: 2 maty
Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Fiaramanidina kely iray no nianjera tao Santee, tanàna amoron-tsiraka any San Diego County, Kalifornia, ny tolakandron'ny alatsinainy 11 oktobra 2021. Farafahakeliny 2 no maty.
Cessna 340A iray no nianjera tamin'ny trano 2 tao amin'ny tanàna manodidina iray izay namono ny olona roa tao anaty sambo.
Ireo voalohany dia manandrana manome toky fa tsy nisy maty tao amin'ireo trano nianjera. Mponina roa no nentina tany amin'ny hopitaly rehefa nitsoaka ny iray tamin'ireo trano ireo.
Toerana famindrana vonjimaika no napetraky ny Vokovoko Mena.
The nianjera ny fiaramanidina tao anaty trano 2 teo an-joron'ireo arabe Jeremy sy Greencastle tokony ho tamin'ny 12:15 hariva dia Cessna 340A ilay fiaramanidina ary ny drafitra sidina dia avy any Yuma, Arizona, hatrany amin'ny seranam-piaramanidina Executive Montgomery Gibbs Executive ao Kearny Mesa, hoy ny mpitondra tenin'ny County of San Diego.
Nilaza ny manampahefana fa mbola tsy fantany hoe firy ny olona ao anaty fiaramanidina, fa mino izy ireo fa “tsy azo iainana” ireo naratra. Ireo mpamaly voalohany dia miasa mba hanamafisana fa afaka nivoaka soa aman-tsara ireo tao anatin'ireo trano voakasik'izany.
Ao amin'ny horonantsary nataon'ny SkyFOX, ny motera mpamono afo dia hita manaparitaka ireo trano 2 noravana tamin'ny fianjerana. Heartland Fire & Rescue dia nilaza fa trano fahatelo no simba, ary ny ekipa mpiasan'ny fitaovana mampidi-doza dia nitodi-doha nankany amin'ilay faritra. Hita fa voadona ihany koa ny kamio boaty iray.
Nisy lehilahy iray teny an-toerana nilaza tamin'ny FOX 5 fa nahazo antso tamin'ny mpifanila trano taminy izy nilaza fa nentina haingana tany amin'ny hopitaly ny reniny sy ny dadany. “Tsy fantatrao hoe hatraiza ny ratra nahazo azy ireo. Fantatro tamin'ny firesahana tamin'ny mpifanila vodirindrina amiko fa maratra sy mangana kokoa izany. Heveriko fa tsara vintana izy ireo fa tao ambadiky ny trano rehefa nitranga izany satria tonga teo aloha. Michael, ilay mpifanolo-bodirindrina aminy, dia nisintona ny reniko avy teo am-baravarankely ary ny raikeliko dia teo an-tokontany, ka noravan'izy ireo ny fefy mba hamoahana azy. ”
Eo amin'ny sisiny 2 eo andrefan'ny lozam-pifamoivoizana fotsiny no misy ny lisea Santana High School, izay ahatokisana ny mpianatra rehetra, araka ny navoaka tao amin'ny Twitter. Navoaka ireo mpianatra handeha hody na hisakafo antoandro, miankina amin'ny fandaharam-pianarana alatsinainy.
Nisy toerana fialokalofana vonjimaika napetraky ny Vokovoko Mena amerikana ao amin'ny Cameron Family YMCA ao amin'ny 10123 Riverwalk Drive any Santee.
Ny antony nahatonga ny fianjerana dia eo am-panadihadiana.